Tantaran'ny Google Algorithm Change | Martech Zone
Talata, Martsa 20, 2012 Talata, Martsa 20, 2012 Douglas Karr
Rehefa miteny amiko ny olon-kafa fa nanana olon-kafa izy ireo SEO ny tranonkalany toy ny hoe hetsika tokana io dia manontany foana ilay olona manao ny asany aho. Ny fanatsarana dia tsy tetik'asa izay manomboka sy mijanona. Miova hatrany ny fifaninanana, miovaova hatrany ny teknolojia, miova foana ny mpijery… ary miovaova hatrany ny Algorithme Google. Efa nandefa fotsiny tamin'ny teo izahay Miova ny Google Panda - fa ity infographic ity dia feno kokoa. Ny fitazonana ny lohalaharana amin'ireo fanovana ireo dia ezaka tsy tapaka… ary ny fanatanterahana an-tsokosoko ny tolo-kevitra avy amin'i Google momba ny fanovana algorithm dia afaka mitazona anao mialoha ny fifaninanana sy hanatsara ny valiny ankapobeny.
Infografikan'i Google Marketing Marketing orinasa, Outrider.
Tags: google algorithmgoogle algorithm miovaniova ny google
Fandraisana sy fizarana ara-tsosialy ara-tsosialy
Mar 20, 2012 ao amin'ny 1: PM PM
Kely loatra ka tsy hay vakiana = /
Mar 20, 2012 ao amin'ny 2: PM PM
Hevitra tsara! Hametraka rohy eo amboniny izahay mba hahafahanao manokatra.
Mar 20, 2012 ao amin'ny 7: PM PM
Tsara lavitra kokoa izao 🙂 Misaotra!
Mar 20, 2012 ao amin'ny 10: PM PM
Mar 20, 2012 ao amin'ny 3: PM PM
Nohavaoziko ny lahatsoratra Alexandre - raha tsindrio ny sary dia hitondra anao any amin'ny tranokala loharano misy motera zoom io. Misaotra anao nanasongadina izany!
Mar 20, 2012 ao amin'ny 9: PM PM
Manana iray ho anao aho, ry sakaiza: inona araka ny eritreritrao ny fahasamihafana misy eo amin'ny Panda sy ny sazy mihoampampana? Amin'izao fotoana izao, toa ny departemanta departemanta redundancy sy izay rehetra nanondro ny horonantsary farany nataon'i Matt Cutts momba ny Over-Optimization dia toa tsy nijery ilay horonan-tsary satria ny famenoana teny lakile sy ny lahatsoratra miafina dia nahatonga anao hanana olana hatramin'ny nanolorana ny Google Webmaster - Fahalavoana 2007 raha tadidiko.
Mar 21, 2012 amin'ny 9: 42 AM
Google dia nivoatra hatrany ary nanisy fanovana, saingy mazava ho azy fa taona lehibe iray ny taona 2011. Google dia te hanome ny mpampiasa azy valiny tsara indrindra. Amin'ny maha SEOs, zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra ireo fiovana algorithm ireo ary mitazona takelaka eo amin'ny tranonkalantsika.